Blog Blog LucidPix - LucidPix
Ntuziaka Mbido LucidPix
Ntuziaka mmalite LucidPix Anyị arụsila ọrụ ike iji mee ka LucidPix kachasị mfe iji 3D okike e mepụtara, na-edezi ma na-ekesa ngwa dị na iOS na gam akporo. Ndụmọdụ na usoro ndị a site na ntuziaka mmalite a ngwa ngwa ga-enyere gị aka ...
Otu esi Ekekọrịta Osise LucidPix
Otu esi Ekekọrịta na LucidPix Gallery youmaara na ị nwere ike itinye Fri 3D na foto nke 3D na LucidPix osisi ga-ahụ ọtụtụ narị puku ndị ọrụ ibe gị? Ọ dị mfe, naanị soro usoro ndị a dị mfe: Mepụta ...
Ngwa kachasị mma 3D foto nke 2020 maka iPhone na gam akporo
The Top 10 Best 3D Photo ngwa nke 2020 Ọ dị ka 2020 ga-abụ “afọ nke 3D” dị ka achọ maka 3D Photo ngwa ọdịnala na-eto. Na nzaghachi, ndị mmepe ewepụtala ebili ngwa nke 3D, na ụfọdụ na-eme nke ọma karịa ...
10 Ihe atụ nke ọgụgụ isi na ndụ anyị kwa ụbọchị Mgbe ọtụtụ mmadụ na-eche maka ọgụgụ isi mmadụ, (AI), ha na-eche igwe dị iche iche na-eche etu esi ele mmadụ anya na fim dị ka Star Wars na Terminator. AI…
Foto okike maka ndị mbido Ọtụtụ n’ime anyị na-achọ ihe ha ga-eme ka anyị na-ebuso nje a agha, nke a emeela ka ọtụtụ ndị nweta ịma mma nke okike. Onwere otutu mmadu na-esonye n’uwa ndi ukwu…
Etu ị ga - esi mee ka GIF animimili na 3 Nzọụkwụ Mfe ingmepụta GIF animated gị site na ọkọlọtọ anaghị esiri ike ma ọ bụ na-eri oge. Site n'ịgbaso usoro atọ a dị mfe, ị ga - eme foto GIF nke gị site na foto nke gị na mba…
5 Ndụmọdụ Maka Portmepụta Pọtụfoliyo Na-ese Onlinentanetị Na bestzọ kachasị mma iji gosipụta nkà foto gị dị ịtụnanya ma bido ọrụ gị dị ka onye na-ese foto bụ imepụta Pọtụfoliyo Na-ese foto n'ịntanetị. Ka ị na-erere onwe gị na mgbasa ozi mmekọrịta bụ…
Etu ị ga-esi mepụta GIF na LucidPix N'agbanyeghị etu ị siri kwuo ya, GIF ma ọ bụ GIF, anyị bụ nnukwu ndị egwu nke usoro onyonyo. Ọ bụ ihe ijuanya na onye mepụtara GIF bụ otu n'ime ngwaọrụ akachasị eji arụ ọrụ na LucidPix. Ngwa Android a na iPhone na-eme ka ọ bụrụ ọsọsọ ...
Ebe Kasị Mma Ileta na Gris!
Ebe Kasị Mma Ileta na Gris! Na post blog a, anyị na-agụta ebe kachasị mma ịga na Gris, yabụ gaa n'ihu na-agụ ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ụsọ mmiri ọcha, oke osimiri doro anya na ọtụtụ nri dị ụtọ! N'agbanyeghị ...
Echiche nke Oge Ezumike 3D Ezumike Obi abụọ adịghị ya na oge ọkọchị bụ oge kachasị mma maka ndị na-ese foto. Ebe ihu igwe zuru oke na ogologo elekere, enwere ọtụtụ ohere inyocha na ịnwale echiche foto. Ọ bụrụ ...
Ndụmọdụ maka ịse foto obodo
Ndụmọdụ maka ịse foto Foto Obodo obodo nwere ike ịbụ nnukwu ebe iji ese foto, mana oge ụfọdụ ọ nwere ike isi ike ijide ezigbo ịma mma nke obodo ahụ. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ maka otu ị ga - esi see foto obodo kacha mma na ndị niile…
Ebe kachasị mma ị ga-eleta na France!
Ebe kachasị mma ị ga-eleta na France! Bonjour si France! Iji mee ka afọ ju agụụ njem gị n'oge a na-adọpụ iche, anyị na-enye gị ndepụta kachasị nke ebe kachasị mma ị ga-eleta na obodo a mara mma na Europe. Chekwaa peeji a ...